Abathengi BangoLwesihlanu Olumnyama - Izikhova Zasebusuku vs Izinyoni Zakuqala | Martech Zone
NgoLwesibili, Okthoba 29, 2013 NgoLwesibili, Okthoba 29, 2013 Douglas Karr
The 2013 Thola bese ugcine I-Black Friday Shopping Survey ikhombisa ukuthi kanjani, nini futhi kungani izitolo zasebusuku nezitolo ze-Early Bird ngo-Black Friday. Ngenkathi ikakhulukazi kugqugquzelwa ukuthengisa, abathengi beBlack Friday baqhutshwa yinjabulo yomncintiswano ukuthola okuhle futhi maningi amathuba okuthi babe nesiko elakhelwe ezitolo zeBlack Friday.
Abathengi beBlack Friday bakhombisa ukwethembeka okuncane komkhiqizo wesitolo futhi bakhangwa ngamadili athile noma izinto abazitholayo lapho behlela uhambo lwabo lokuyothenga. Izinhlobo zamadili ezikhanga kakhulu yilezo ezinikeza isaphulelo sephesenti. Banamathuba amaningi okuthi baphothule iningi lokuthenga kwabo ngamaholide ngo-Black Friday.
Sihlaziya futhi sifunde bonke abathengi, kepha iBlack Friday shopper iyinhlobo ehlukile, a umthengi omkhulu othokoza ngokuthola amadili amahle nokwandisa usuku. Ngocwaningo lwe-Find & Save, sithole ukuthi bangabahleli, bathanda injabulo yokuthola okuningi futhi bazokwamukela izinhlelo zokusebenza zeselula namanye amathuluzi wokuhlela ukusiza ukukhulisa usuku. Kwakuthakazelisa futhi ukubona umehluko phakathi kwabathengi abahamba phakathi kwamabili, kuqhathaniswa nalabo abashiye into yokuqala ekuseni. UBen T. Smith, IV, isikhulu esiphezulu seWanderful Media
Night Owl vs. Early Bird Black NgoLwesihlanu Abathengi
The Thola bese ugcine ucwaningo luqhathanise imiphumela yezinhlobo ezimbili ezahlukene zabathengi be-Black Friday: the Izikhova Zasebusuku - Abathengi abamnyama bangoLwesihlanu bashiya indlu yabo ngaphambi kuka-5: 00 ekuseni, kanye ne- Izinyoni Zasekuqaleni - Abathengi abamnyama bangoLwesihlanu bashiya indlu yabo ngemuva kuka-5: 00 ekuseni.
Abathengi be-Night Owl kungenzeka ukuthi bathenge kakhulu amaholidi abo - amaphesenti angama-63 ajwayele ukuqeda ngaphezu kwengxenye yokuthenga kwabo ngo-Black Friday, uma kuqhathaniswa namaphesenti angama-42 kubathengi be-Early Bird abashiya ngemuva kuka-5 ekuseni.
Sekukonke, amaphesenti angama-53 ama-Night Owls namaphesenti angama-38 eZinyoni Zakuqala athi “ayayithanda” lapho ebuzwa ukuthi azizwa kanjani ngokuthengiswa kweBlack Friday okuqala ekuseni ngoLwesine kusihlwa kuze kufike eSontweni.
Cishe amaphesenti angama-75 ama-Night Owls athenga izinto ze-elekthronikhi, uma kuqhathaniswa namaphesenti angama-60 abathengi be-Early Bird.
Ngenkathi womabili amasethi abathengi enentshisekelo yokuthola okukhulu, amaphesenti angama-40 ama-Night Owls athe awuthokozela lo mncintiswano, kuqhathaniswa namaphesenti angama-24 abathengi be-Early Bird.
Iziphesheli Zokucwaninga Zabathengi BangoLwesihlanu kanye Nokwakha Uhlelo Lomdlalo
Ukutholwa okuyisisekelo kocwaningo kubalula ukuthi amaphesenti angama-67 abathengi awacwaningi nje kuphela futhi ahlela uhlelo lweBlack Friday, kepha futhi banecebo elihlukile unyaka nonyaka ngokususelwa lapho bezothola khona amadili amahle kakhulu.
Imithombo yezindaba yendabuko efana namasekhula wamaphephandaba, ithelevishini, kanye neposi eliqondile kusabhekwa njengemithombo ephezulu yabathengi beBlack Friday; empeleni, amaphephandaba ayesalinganiselwa iningi (amaphesenti angama-36) njengomthombo ophezulu wolwazi. Kepha ngenkathi kuphela amaphesenti angama-29 athi ama-imeyili ayimithombo ephezulu yolwazi, amaphesenti angama-82 athe angaba nentshisekelo yokuthola ama-imeyili ngokuthengiswa kweBlack Friday.
Amadivayisi eselula aya ngokuya ebaluleke ngenkathi uthenga. Ababili kwabathathu bangasebenzisa noma bacabangele ukusebenzisa umakhalekhukhwini wabo ukusiza ngokuthenga kwe-Black Friday - ngokuyinhloko bazoyisebenzisela ukubheka amanani noma ukusebenzisa i-geo-locator ukuthola ukuthengisa eduze kwabo. Banentshisekelo yokusebenzisa umakhalekhukhwini wabo ukubhekabheka amasekhula kaLwesihlanu Omnyama ngenkathi usohambeni.
Nayi i-infographic evela ku- Ukuzulazula:
Tags: Ulwesihlanu olumnyamaIzinyoni ZasekuqaleniIzikhova Zasebusuku
I-TapSense: Umhlahlandlela Ophelele Wokumaketha Kwamaselula ka-2014
Okthoba 30, 2013 ngo-7: 22 AM
Kuhle ukufunda uDoug! Ngibe nesikhathi esimnandi impela ngiyifunda ..